Ifoni yeSurface izoba nenzwa yezigxivizo zeminwe ... esikrinini | Izindaba zamagajethi
Ifoni yeSurface izoba nenzwa yezigxivizo zeminwe ... esikrinini
UJoaquin Garcia | | AmaSelula, Ubuchwepheshe
I-Surface Phone iyiselula entsha ye-Microsoft futhi ikusasa eliseduze lokwehlukaniswa kwamaselula kweMicrosoft. Kodwa-ke, kulezi zinsuku zakamuva imininingwane eminingi namahemuhemu kukhulunywa ngale mobile nezinye izinhlobo zeMicrosoft.
Ulwazi lwakamuva luyingxenye yeqiniso lokuzwa okulenza lihluke. Ngokusobala i-Surface Phone entsha izoba ne-in-display sensor yeminwe. Ngeke ibe nenkinobho, noma yini efanayo, umsebenzisi uzofaka umunwe wakhe esikrinini futhi izovulwa.
I-patent entsha ye-in-screen sensor zeminwe ingaba kwimikhiqizo eminingi ngaphandle kwe-Surface Phone
Lona ubuchwepheshe busanda kugunyazwa yiMicrosoft, ekhiphe imininingwane yokufakwa okungenzeka kufoni yeSurface. Lokhu akukuthetheleli lutho futhi amalungelo obunikazi awavamisile ukukhombisa noma yini, kepha uma sibheka ukuthi abaphathi beMicrosoft bathe badinga iselula ephuka ngokujwayelekile futhi okumangazayo, Iqiniso ukuthi le sensor yezigxivizo zeminwe esibukweni yinto engenzeka kakhulu, kungenzeka kakhulu uma kunokwenzeka kunenani elikhulu lememori yenqama okuxoxwa ngayo.
Futhi kubonakala sengathi lokhu kuzoba yikusasa lezinzwa zeminwe ngoba IMicrosoft akuyona ukuphela kwenkampani ehambisana nalobu buchwepheshe. Isikhathi eside, lapho bekhuluma nge-iPhone 7, abaningi bakhulume ngalobu buchwepheshe obusebenza ku-iPhone. Phakathi kwezinye izinto ngoba i-Apple ibinentshisekelo kuyo, kepha ayikaze yethule okufanayo.
Ngakolunye uhlangothi, iMicrosoft ibheja ngokuqinile kwezokuphepha nakuWindows Hello, ngakho-ke, yize iSurface Phone ingenalo lolu hlobo lobuchwepheshe, impela lokho IMicrosoft ifaka lobu buchwepheshe emikhiqizweni yayo, njengeSurface Pro noma iSurface Book. Kunoma ikuphi kubonakala kunjalo izinkinobho zezinhlamvu zeminwe ezidumile zinezinsuku zazo ezibaliwe noma kunjalo kuzoba lapho inzwa yesikrini seminwe isemakethe Awucabangi?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ubuchwepheshe » Ifoni yeSurface izoba nenzwa yezigxivizo zeminwe ... esikrinini
IMicrosoft iqhubeka nokudiliza abasebenzi bayo, manje sekuyithuba labasebenzi beSkype
Landa i-beta ye-Chrome bese udlala amavidiyo ngemuva ku-Android